सोमबार सामान्य अंक घट्यो नेप्से - Naya Patrika
सोमबार सामान्य अंक घट्यो नेप्से
साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ४२ अंक घटेको छ । बजार खुलेदेखि सुस्त गतिमा रहेको नेप्से यस दिन घटेर १ हजार ३ सय ४० दशमलव २९ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । कारोबारमा आएको तीन समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेपछि नेप्से घट्न पुगेको हो । बजार धेरै समयदेखि सुस्त हुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । ठूला लगानीकर्ताले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाएका छन् ।
साना लगानीकर्ताले भने घाटा कम गर्न कम मूल्यमा पनि सेयर बिक्री गर्न थालेको एक ब्रोकरले बताए । सेयर आपूर्ति बढेका कारण दबाबमा परेको बजारमा दोस्रो त्रैमासिक विवरणहरू सन्तोषजनक नआउँदा लगानीकर्ता निराश भएको उनले बताए । अधिकांश वित्तीय संस्थाले दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । तर, लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसारको नाफा आर्जन गर्न नसकेका कारण बजारमा चमक आउन सकेको छैन । साथै, बजार विस्तारका कार्यले खासै गति नलिएका कारण पनि लगानीकर्ता निराश भएका छन्।
यस दिन १ सय ५६ कम्पनीको ३ हजार ४ सय ४० पटकको कारोबारमा रु. २४ करोड ६७ लाख ६ हजार ७ सय ८१ बराबरको ६ लाख ८४ हजार २८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ७४ अंक घटेर २ सय ९२ दशमलव शून्य ७ बिन्दुमा पुगेको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेर रु. १६ खर्ब १४ अर्बमा सीमित भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३४ दशमलव शून्य ८ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
रकमका आधारमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको संस्थापक सेयर सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ । यस दिन सो बैंकको रु. १ करोड ७४ लाखबराबरको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयरमूल्य यस दिन १० प्रतिशत बढेको छ । यस कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनका लागि फागुन ८ गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने भएको छ । दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेड र आरएसडिसी लघुवित्तको सेयरमूल्य यस दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५६ कम्पनीमध्ये ५३ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ८४ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १९ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
सोमबार ट्रेडिङ, डेभलपमेन्ट बैंक र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बढेको छ भने अरू समूहको परिसूचक घटेको छ । ट्रेडिङ समूहको परिसूचक यस दिन २ दशलमव २३ प्रतिशत, ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, होटेल समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत र जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव १ प्रतिशत घटेको छ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सले थप्यो हकप्रदमा आवेदन दिने म्याद
सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद थपेको छ । कम्पनीले पुस २३ गतेदेखि २ बराबर १ अनुपातमा २६ लाख ३ हजार ३ सय १४ दशमलव शून्य ७५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । सो सेयरमा पुस ३ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले फागुन १३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । माघ २८ गते निष्कासन बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको यस कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि तयार गरेको विवरणको दफा ‘र’ मा भएको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप गरेको हो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङको बुक क्लोज
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले फागुन ८ गतेदेखि २२ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले फागुन २२ गते हुने साधारणसभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्न लागेको हो ।
जनउत्थानका अध्यक्षद्वारा राजीनामा
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडका यमबहादुर विकले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् । माघ २७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
गुडविलको नाफा ३ करोड ८ लाख
गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा गुडविल फाइनान्स लिमिटेडको नाफा सामान्य बढेको छ । कम्पनीको नाफा गत आवको तुलनामा ४ प्रतिशत बढेर रु. ३ करोड ८ लाख पुगेको छ । कम्पनीको खुद व्याज आम्दानी गत आवको तुलनामा २० प्रतिशत घटेपछि नाफा प्रभावित भएको हो ।
कम्पनीले व्याज खर्च गत आवको तुलनामा ६८ प्रतिशत बढेपछि खुद व्याज आम्दानी घट्न पुगेको हो । कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा रु. २१ लाख ८६ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा रु. ४ करोड ४७ लाख रहेको छ । यो गत आवको तुलनामा ६७ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आवको तुलनामा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७६ प्रतिशत बढेर रु. ८० करोड पुगेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष १७ प्रतिशत बढेर रु. १४ करोड ८६ लाख पुगेको छ । कम्पनीले दोस्रो त्रैमाससम्ममा रु. ४ अर्ब ७९ करोड संकलन गरी रु. ४ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ ।